Ụbọchị My Pet » 3 Nzuzo ka dịwara na a Mmụta chekwara
emelitere ikpeazụ: Sep. 25 2020 | 2 min agụ
Olee otú m mmasị m ụbọchị na ka nwere ego na-eme na-asa ákwà?
foto site RBerteig CC
Nke a bụ a na ịpị nke na-alụ maka ihe niile ụmụ akwụkwọ nke elu-akụziri ụwa. Nke a gara aga izu m ike sonso imeli nnọọ mkpa akwụkwọ mposi, na m kọfị iri mmadụ ahụ na-eyi egwu ibibi obere akpa m. Ma, dị nnọọ ka m nwere ike ghara inwe gburugburu mkpa nke mgbe nile na caffeine, ụmụ akwụkwọ na-apụghị ịgbanahụ eziokwu na ha na-na na mebiri.
Ibi a na-amụrụ mmefu ego adịghị mfe. Ma i nwere a akụkụ oge ọrụ ma ọ bụ bụ otu n'ime ndị kechioma ole na ole bụ ndị nwere nne na nna ha 'nkwado ego, ọ bụ ka na-aga n'ihu agha. Iguzogide Friday n'abalị Pizza bụ ike zuru ezu ma na-eme ka ihe ka njọ, e nwere ihe ọzọ ahụ bụ egosi na kọleji na mahadum; mkpakọrịta nwoke na nwaanyị.
N'agbanyeghị gị amara na ihe ịrịba mma dị, ime gị ụbọchị ọ ga-emekarị na-eri gị ụfọdụ mgwakota agwa. Otú ọ dị, e nwere bụ ìhè na njedebe nke oké ọnụ ọwara. Ọ bụ gị kechioma ụbọchị n'ihi na ndị a na atọ nzuzo pụrụ inyere gị aka gị na i nwere ụbọchị mgbe ha na-a mebiri amụrụ.
Nọrọ nso n'ụlọ ... ka n'ezie nso
foto site Steve Jurvetson CC
College bụ ebe obibi gị pụọ n'ụlọ. N'eziokwu, ọ bụ eleghị anya ndị ọzọ ụtọ karịa gị ezigbo ebe obibi. Ya mere, ị nwere ọtụtụ uru ma nwere ụbọchị echiche ziri ezi gị na-fingertips.
A nkiri abalị na iji nri. Netflix e n'ụzọ nkịtị mere maka na mahadum ụmụaka.
Cook ọnụ (ngwa ndakwa nri nri ka mkpa!)
Play a osisi egwuregwu, kaadị ma ọ bụ a video egwuregwu
Mee a blanket nkera ọnụ. Onye ọ bụla bụ nwata obi, adịghị ịgọ agọ
N'ihi na ihe artsy-fartsy di na nwunye, eme ihe nka ma ọ bụ agba ọnụ
Dị nnọọ mfe ikwu okwu na cuddling-emekarị-arụ ọrụ ebube
Eme ka a mmefu ego atụmatụ
foto site Bill & Vicki T CC
Ị na-adịghị na-amụta ihe niile ha nọ na klas. The nkà nke mmefu ego atụmatụ ihe a bara uru na nnọọ uru otu. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ghara itinye ya ala na gị malitegharịa ọ ga-enyere gị ịbụ smart banyere gị ego gị. Tukwuru ala, -esi mkpịsị edemede na akwụkwọ (ma ọ bụ ndị ọzọ yiri n'aka na gị na laptọọpụ) na-eme atụmatụ gị kwa ọnwa akwụ ụgwọ. Nke a ga-agụnye nri, ntụrụndụ, mkpa, akwụkwọ onunu, na ọtụtụ ihe ụbọchị. Gbalịa na-etinye ala nanị ihe i nwere ike na-enweghị. Osote, ịgbakwunye costys ọnụ ma na-a dapụtara ngụkọta nke otú i nwere ike iwepụta kwa ọnwa. Ugbu a, bịa ihe ịma aka; agbalị na-aga ihe a ego, na ọbụna na-eji obere ma ọ bụrụ na o kwere omume. Ugbu a, i nwere ike ịbụ a ezi n'obi, ka ịkwụ ụgwọ maka ụgwọ na-eche kpamkpam mebiri.
Jiri gị Resources
foto site dougwoods CC
Gị kasị ukwuu akpan owo bụ gị ego. M ụda dị a jụụ ọkà ihe ọmụma na a osisi mkpara na ajị agba ma m. Dị ka ụmụ akwụkwọ anyị nwere ọtụtụ uru. Ị maara ndị dere akwụkwọ ị nwetara ná mmalite nke afọ na-adịghị meghere ebe? Ọfọn, ha na-stocked zuru ego na-azọpụta ụbọchị echiche ...-nọgide nke ego igbu ndị ezie. Ọ na-adịghị n'ebe. N'agbanyeghị ebe ị na-aga ụlọ akwụkwọ, M nwere ike obi sie gị na ọtụtụ na-echekwa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ulo na gburugburu gị campus enye nwata akwụkwọ ego. Jiri ndị a ohere na-azọpụta ego na akwụkwọ onunu, nri na ihe ndị ọzọ. E nwere ọtụtụ amụọ, bargains na giveaways maka nanị ụmụ akwụkwọ. Ịghọ a coupon eze nwaanyị ma ọ bụ eze na-adịghị ihe ga-emere ihere.
Na atọ ndị a nzuzo, ị ga-unstoppable. I nwere ike imeri ndị na-akpa ụwa na oké ala na ka nwere ego fọdụrụ na-egosi ya. Ya mere puta ma weghara ụfọdụ obi na ịzọpụta ego ụfọdụ.
The Bedlam Farm ed N'ihi gaje Dog Nwe
Top 10 Atụmatụ maka Ọma dịwara